Udliwanondlebe noRicardo Alía, elinye lamagama amakhulu kwinoveli yolwaphulo-mthetho eSpain. | Uncwadi lwangoku
URicardo Alía, chemistry kunye nechess njengomsonto oqhelekileyo kwizicwangciso zeenoveli zakhe.
Sinelungelo kunye nolonwabo lokuba namhla kwibhlog yethu kunye URicardo Alía (San Sebastián, 1971), umbhali wohlobo olumnyama kunye neenoveli ezine eziphumeleleyo kwityala lakhe: la I-Zodiac Trilogy, apho esebenzisa khona ulwazi lwe chemistry ukwakha iyelenqe elitsala umfundi, kwaye Inkunkuma enetyhefu, apho ophambili kwi-chess.
Iindaba zoncwadi: URicardo Alía, umbhali odibanisa ukuthanda kwakhe ezincwadini zakhe, uhlobo olumnyama, ikhemistri kunye nechess. I-Chess njengomsonto oqhelekileyo we-Poisoned Pawn kunye ne-chemistry kwi-Zodiac Trilogy, ongayilahli kwi-Poisoned Pawn, unike iinoveli zakho ubukhetheke ngokukodwa. Ngaba ukuthanda kukaRicardo Alía ezintathu kumanyene ezincwadini zakhe?
Ewe ndiyikhemesti ngoqeqesho, umbhali ngobizo kunye nomdlali wechess onomdla. Kwiincwadi zam ndizama ukusebenzisa isincomo esivela kuStephen King (omnye wababhali bereferensi): "bhala ngento oyaziyo".
AL: I-Peon enetyhefu isethwe kwimfazwe yamakhaya yaseSpain, ngebhombu yaseGernika njengesiqalo sezinto ezenzekileyo kamva, ekupheleni kolawulo lobuzwilakhe kunye neyona njongo iphambili yeqhinga kwiminyaka yoo-2000. amashumi eminyaka kamva? Ngaba ibonakalisa indaleko yoluntu lwaseSpain?
RL: Enye yeembonakalo endifuna ukuhambisa nazo Peon enetyhefu kukuba elidlulileyo likho, alilibali, liyakusukela kwaye ekugqibeleni lifikelela kuwe. Ewe, ukubonakaliswa okuthembekileyo koluntu lwaseSpain, ngoku kubuyiswa kwisidumbu sikaFranco, uMthetho woMemori weMbali ...
AL: Utshilo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kudliwanondlebe ukuba "Ndiyabulela kwi-chess ndahlala kude ne-ETA." UArturo, inkosi enkulu yechess, ophambili kwiPawn enetyhefu, naye ubona ikamva lakhe liphawulwe ngumnqweno wakhe wokuqala wechess.
Kwaye bonke abalinganiswa basisiqhamo samava abo. Ngaba kukho ukubonwa okumiselweyo kwiinoveli zakho? Ngaba i-chess iphawule ubomi bakho njengaleyo iphambili ye-The Poisoned Pawn?
RL: Ixesha elidlulileyo libambisa abalinganiswa be Inkunkuma enetyhefu kwaye igqiba ngezenzo zabo. Oku kubalulekile ukuba umfundi "azive" ngokuvela kwabalinganiswa. Ebusheni, i-chess yandibumba njengomntu, yandifundisa ezinye zexabiso endizenzayo ebomini namhlanje. Ndityala kakhulu kubugcisa bezikwere ezingama-64. Ndineenkumbulo ezimyoli ngaloo minyaka.
AL: I-Pawn enetyhefu yinoveli yolwaphulo-mthetho enokufundwa ngaphandle kolwazi lwe-chess, nangona i-chess ingumtya oqhelekileyo weqonga ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni. Ndiyangqina ukuba kunjalo. Ukwenza njani ukuba kube lula ngokulula ngombandela onzima kangaka?
RL: Bendilumkile ukuba ndingayigcwalisi inoveli eneereferensi zechess (ndiqokelela iincwadi ezindala zechess). Umgca owahlula iinoveli kwincwadana yechess awubuthathaka njengoko ubonakala. Kumanqanawa ndenza iinzame zokufunda lo mbhalo-ngqangi ndiphinda-phinda ukuthintela umdlalo wechess phakathi komlinganiswa ophambili nombulali, kunye nemizobo enesicatshulwa, kwaye ndafumanisa ngokukhululeka ukuba inoveli isebenza ngoluhlobo; nditsho nomnye wabafundi bokuqala wandixelela ukuba wabona ichess njengeMacguffin ...
AL: Emva kweTrilogy yeZodiac, ebekwe eSan Sebastián, abalinganiswa abatsha kunye nendawo entsha yePeyoni enetyhefu: ILondon sisimo osikhethileyo kwesi sihlandlo, nangona uqhagamshela neGuernica kunye nedolophu yokucinga yaseMonroca. Ngaba iyongeza ubunzima xa ubhala, uphinde uphinde umzi kunye nenkcubeko engeyoyakho? Yintoni eya kuba ngabalinganiswa kwiZodiac Trilogy? Ngaba sivela kwakhona?
RL: Ndiyaziphinda, kubalulekile ukuba ubhale malunga nento oyaziyo. Ekupheleni kwe90s ndichithe ixesha eLondon kwaye ndiye ndawadlulisela kula mava Inkunkuma enetyhefu. IMonroca izinze eMonroy, kwidolophu katata wam. Ndifuna ukukhula njengombhali kwaye kwinoveli nganye ndijonga umhlaba omtsha kunye nabalinganiswa abatsha. Andiqondi ukuba ndiza kubuyela Zodiac TrilogyMhlawumbi uya kubhala i-prequel eya kuMax Medina kwinqanaba lakhe laseMadrid njengelungu lamaPolisa kaZwelonke, kodwa ayizukubakho kwixesha elizayo.
AL: Ngaba iPawn enetyhefu iya kuqala i-trilogy entsha ejikeleze i-chess okanye ngaba ezi projekthi zilandelayo ziya kumacala ahlukeneyo?
RL: Umbono kukuhamba kancinci kancinci kwinoveli yolwaphulo-mthetho kwaye ujonge ezinye iintlobo zoncwadi. Ndingumfundi we-eclectic kwaye kufanele ukubonakaliswa xa kubhalwa. Ngoku ndisebenza kwinoveli yemigulukudu ebekwe eChicago kwiminyaka ye-90.
AL: Khawusixelele ngakumbi ngawe: Kwenzeka njani ukuba uRicardo Alía abe ngumfundi? Zithini iincwadi kwilayibrari yakho ozifunda rhoqo emva kweminyaka embalwa? Ngaba ukhona umbhali onomdla kuye, omnye wabo uthenga kubo iinoveli zabo nje ukuba zipapashwe?
RL: Ndifunde kuphela uGabriel García Márquez kunye "nebhayibhile" Ngelixa ndibhalayo ngu S. King; ubomi bufutshane kakhulu kwaye kuninzi ekufuneka kufundwe. Ndibalekela kwivenkile ethengisa iincwadi kunye neVargas Llosa, NesbØ, Lemaitre, Don Winslow, Murakami ...
AL: Kutheni inoveli yolwaphulo-mthetho?
I-Pawn enetyhefu: Umdlalo wechess. ILondon ibhodi kunye nabantu abangaziwayo iziqwenga umbulali adlala nazo.
RL: Ndiyazithanda iintsomi, luhlobo olundinika olona lonwabo xa ndifunda kwaye lundinika inkululeko eninzi ngokubhala, kodwa njengoko benditshilo ngaphambili andifuni ukuzijuba, eneneni ndiqale njenge "noir" "umbhali phantse ngamathuba kuba kwidrowa wayegcina eminye imibhalo kodwa umhleli kaMAVA wayefuna inoveli yolwaphulo-mthetho ebekwe emantla, yonke enye yimbali ...
AL: Ngaphandle komfanekiso wesiko wombhali ongenisiweyo, ovalelweyo kwaye ngaphandle kokubhengeza eluntwini, kukho isizukulwane esitsha sababhali abasebenzisa ii-tweets mihla le kwaye bafake iifoto kwi-Instagram, abo uthungelwano lwabo loluntu iwindow yabo yonxibelelwano kwihlabathi. Bunjani ubudlelwane bakho neenethiwekhi zentlalo?
RL: Ndiyaqonda ukuba ndingumbhali “weSinger style”, ukuba bendinako, ndingapapasha ngesibizo ngaphandle kwefoto, kodwa okwangoku akunakwenzeka, kufuneka sinike ukubonakala kweenoveli kunye nababhali kufuneka batyhale ukwenza imveliso yaziwe . Unxibelelwano lwasentlalweni lubalulekile, ndihamba kuzo zonke kodwa hayi yonke imihla, andinaxesha kwaye kufuneka ndililawule phakathi kosapho, umsebenzi, ukufunda nokubhala, ezo zezona ziphambili, ndiyazazi iimeko zababhali abafunda kancinci kuba zininzi kwimidiya yoluntu, endiyithatha njengempazamo enkulu.
RL: Uluvo lokuba inkcubeko ifanele simahla ingenile kweli lizwe, kodwa emva koko, bahlala phi abadali? Iincwadi zam kungaphelanga iveki epapashiweyo sele zenziwe ngophangi. Bububi bendalo obunokuthi bupheliswe kwisiseko sokuba ubuqhetseba benza umonakalo omkhulu kubabhali. Phambi kokuba ukhuphele incwadi, ungaya kumathala eencwadi, kwiivenkile ezithengisa iincwadi ezinamasekondi okanye kumaqonga asimahla. Ndihlala ndihlala kwi-Barcelona Municipal Libraries Network.
RL: Iphepha, ngaphandle kwamathandabuzo. Ndiqale ukuqina nge-ebook kodwa inyani kukuba ngoku andazi nokuba ndinayo phi. Ukuchukumisa iphepha, isiciko, ukuguqula amaphepha, indawo yokufunda, yinto engenakoyiswa.
AL: Kwaye ukugqibezela owona mbuzo ubuqu, azalisekiswa ntoni amaphupha kaRicardo Alía kodwa engekagcwaliseki?
RL: Eyona nto ilula kunye nolula kaJ Ukupapasha liphupha elizalisekayo kwaye uhlala ngokubhala liphupha ekufuneka lizalisekisiwe.
Siyabonga, URicardo Alía, Ndinqwenela ukuba niqhubeke nokuqokelela impumelelo kumceli mngeni ngamnye omtsha kwaye niqhubeke nokutsala abafundi kwiziza ezakhiwe kakuhle esele siqhelene nazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » Udliwanondlebe noRicardo Alía, elinye lamagama amakhulu kwinoveli yolwaphulo-mthetho eSpain.